श्रीमान् विदेश गएपछि किन काम गर्नु पर्यो र ! जस्तो लाग्थ्यो
2017-01-29 | तीतोपाटी डट कम
तीतोपाटी - ‘कति दिन गाउँघरमा मेलापात, घाँसदाउरा अनि पँधेरामै सीमित हुनु । न पैसा आउँछ न त ज्यान आरम नै पाउँछ । दिन रात दु.ख गर्दा पनि केही उपलब्धी भएन । अब श्रीमान विदेश जानु भएकै छ पैसा पठनईहाल्नु हृुन्छ नी । त्यसैले अब धेरै दुःख गर्दिन ।’
श्रीमान विदेश गएपछि खोटाङको दिक्तेल नगरपालिका–८ कीे शर्मिला राई मगरलाई यस्तै सोच आयो । खर्च गरेर सकौं भन्ने त थिएन तर श्रीमानले विदेशबाट महिनाको झण्डै ५० रुपैयाँ पठाउनुहुन्थ्यो । त्यो घर खर्चमै सकिन्थ्यो । यसले उनलार्इ हैरानी त लाग्थ्यो नै सासु ससुरा पनि सन्तुष्ट थिएनन् ।
त्यसैले उनी विदेशको कमाइ कसरी जतन गर्ने, कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने सोचिरहेकी थिइन । यसैबेला गाउँमा वित्तिय साक्षरता कक्षा सुरु भयो । विदेश गएका परिवारका लागि परदेशको कमाइको सदुपयोग अनि बचत बारे सिकाउने थाहा पाएपछि उनी पनि सहभागी भइन ।
३१ हप्ताको कक्षामा सहभागी भएपछि शर्मिलाको बुझाइ र व्यावहार पूरै फेरिएको छ । वित्तिय साक्षरता कक्षामा सहभागी हुनुभन्दा पहिले उनले आफूसँग भएकोबाट महिनाको २० रुपैयाँ आमा समूहमा जम्मा गर्दथिन । तर जम्मा गर्ने र खर्च गर्ने क्रम झण्डै उस्तै उस्तै हुन्थ्यो । त्यसैले पैसा जोगाउन सकेकी थिइनन् । तर वित्तिय साक्षरता कक्षामा सहभागी भएपछि उनले बैंकमा महिनाको ३ सय रुपैयाँ जम्मा गर्न थालिन । छोराका लागि बाल बचत खाता पनि खोलिन ।
काम गर्न छोड्ने मनस्थितीमा पुगेकी शर्मिलाले अहिले पसल सुरु गरेकी छिन । ‘बाटोकै छेउमा घडेरी थियो तर यो ठाउँमा व्यापार गर्न सकिन्छ भन्ने नै सोचेको थिइन तर कक्षामा गएपछि यही ठाउँ व्यापारका लागि राम्रो हुने रहेछ भन्ने पनि बुझें’ शर्मिलाले पसल सुरु गर्नुको कारण पनि सुनाइन । उनले बाटो छेउमा भएको घडेरीमा जस्ताले बेरेर किराना पसल खोलेकी छन । बिहान छोरालाई स्कुल पुर्याउँछिन अनि दिनभरि यही पसलमा बस्छिन् ।
हिसाब किताबको अर्थ पनि बुझें
श्रीमानले विदेशबाट पठाएको पैसा शर्मिलाले न सासु ससुरालाई देखाउँथिन न त अरु कसैलाई नै भन्थिन । त्यही भएर त उनलाई बेला बेलामा सासुससुराले ‘तेरो श्रीमानले कति पठाउँछ हामीलाई के थाहा ? थाहा पाउन त भन्नुपर्‍यो नी’ भनिरहन्थिन ।
त्यो सुन्दा उहाँलाई विदेशबाट पठाएको पैसामा किन यति धेरै चासो भएको होला जस्तो लाग्थ्यो । तर वित्तिय साक्षरता कक्षामा सहभागी भएपछि यो त आवश्यक रहेछ भन्ने बुझेकी छन् शर्मिलाले । त्यति मात्रै होइन पारिवारिक छलफल र आम्दानी खर्चको हिसाब किताब राख्ने तरिका पनि सिकेकी छन् । ‘अहिले त हामी परिवारमा सबैजना बसेर छलफल गर्न पनि थालेका छौं’ शर्मिलाले सुनाइन ।
शर्मिला अहिले परिवारका सदस्यलाई परिवारको एउटा सदस्य परिवारकै उद्देश्य पूरा गर्न विदेश गएकाले अरु सदस्यबिचमा छलफल गरेर बचाउनुपर्छ भन्ने कुरा सम्झाउँछिन । उनले परिवारलाई सकेसम्म घर खर्च आफै जुटाउनु पर्ने विदेशबाट पठाएको पैसा खर्च गर्न नहुने सिकाइरहेकी छिन ।
सिकाउने मात्रै होइन उनको व्यावहार पनि त्यस्तै छ । घरको नुन भुटुनदेखि छोरालाई पढाउन लाग्ने खर्च उनले पसलकै कमाइले पुर्याइरहेकी छिन । श्रीमानले पठाएको पैसा जतिसक्दो धेरै बचाइरहेकी छिन । ‘अहिलेदेखि बचत गर्‍यो भने मात्रै विदेश जानेले सोचेको कुरा पुरा हुन्छ भनेर सम्झाउँछु’ शर्मिलाले भनिन् ।
ती दिन सम्झिदा उनलाई त्यतीबेला पैसा चिनेको रहेनछु जस्तो लाग्छ । उनलार्इ कमाउनु भन्दा पनि पैसा बचाउनु ठूलो रहेछ जस्तो लाग्छ ।
उनले बैंकको खाता नम्बर श्रीमानलाई पनि दिएकी छन । अनि अब त घर बनाउने सोचमा पुगेकी छन् । यसले विदेशमा भएका श्रीमान पनि खुशी भएको शर्मिला बताउँछिन । यो सबै वित्तिय साक्षरता कक्षाले सम्भव भएको उनको बुझाइ छ । यसलाई उनी जिन्दगीमा बसन्त आएको रुपमा बुझ्छिन् । त्यसैले भन्छिन् ‘यो कार्यक्रमले मेरो जीवनमा बसन्त नै छाइदियो ।’